Nutridieta: websaydhkaaga cuntooyinka inaad lumiso miisaan | Cuntada Nutri | Cuntada Nutri
Nutridieta: websaydhkaaga cuntooyinka inaad lumiso miisaankaaga
Nutridieta waa a degel ku takhasusay cuntooyinka kaa caawinaya inaad lumiso miisaankaaga. Waxaan dhamaantiin kuu sheegeynaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee nafaqada leh, iyo waliba sifooyinka ay leeyihiin iyo faa'iidooyinka ay u leeyihiin caafimaadkaaga. Haddii aad rabto inaad ogaato cuntooyinka ugu wax ku oolka badan si aad u lumiso miisaanka, ha moogaanin qodobbadayada.
Cunnooyinka ugu waxtarka badan
Haddii aan bilowno raadinta, waxaa jira cuntooyin aan dhammaad lahayn oo aan annaga gacanta ku hayno. Laakiin Nutridieta waxaan kuu keenaynaa kan ugu fiican Cunnooyinka si aad u lumiso miisaanka oo aad u ilaaliso miisaankaaga. Fikrado aad u fudud oo aad ku dhaqmi karto, adigoon gaajoon iyo talooyinka ugu fiican si aad markasta u ilaaliso culeyskaaga.
Taasi waa sababta boggayaga internetka waxaad ka heli doontaa cuntooyinka ugu caansan laakiin isla markaa, kan ugu waxtarka badan uguna nabdoon. Kaliya kuwa noo xaqiijiya natiijooyinka wanaagsan ee aan khatar gelinaynin caafimaadkeenna. Waxaad ogaan doontaa in xoogaa dhiirigelin ah, waxaad ku heli doontaa dariiqaas si aad uga takhalusto kiiladaada dheeraadka ah, markaa halkan waxaad had iyo jeer ku jiri doontaa gacmo wanaagsan. Maaddaama aad ka heli doontid menu ku habboon laxankaaga maalinlaha ah iyo kuwa ugu caafimaadka badan, kuwa ugu taajirsan uguna fudud ee la diyaariyo.
Ma rabtaa inaad ogaato cuntooyin badan?
Hubso inaad soo booqato qaybteena cunnada oo aad ka heli doonto midka ku habboon baahiyahaaga.
Cunnooyinka ugu fiican
Mararka qaar xoogaa waan ka cagajiideynaa markii naloo sheego cuntada dheeraadka ah si aad u lumiso miisaanka. Laakiin wixii hada ka dambeeya, waxaan badaleynaa fikradayada ku saabsan iyaga. Sababtoo ah Nutridieta waxaan ku tuseynaa sida qaar ka mid ah cuntooyinka aasaasiga ah iyo waxyaabo kale oo dheeri ah aad ugu guuleysan karto natiijooyinka aad waligaa rabtay.
Mararka qaar waxaan gacanta ku haynaa waxyaalo nafaqeysan laakiin ma naqaano sida loo isticmaalo. Alaabada dabiiciga ah inaad u isticmaali karto kalsooni buuxda si aad u dareento oo aad u ekaato fiicnaan. Boggayaga internetka waxaad ka arki kartaa dhammaan tusaalooyinka iyo sharraxaadda cad ee aan kaa tusno iyaga. Waxaad ka saari doontaa cabsida nafaqada!
Dibiyeyaasha dufanka dabiiciga ah
Ma rabtaa inaad ogaato nafaqo dheeraad ah?
Qaybteena nafaqada waxaad ka heli doontaa cuntooyin badan oo leh astaamo cajiib ah oo kaa caawin doona inaad miisaankaaga hoos u dhigto ama aad caafimaadkaaga hagaajiso. Dhammaantood miyaad taqaan?
Eeg nafaqo dheeraad ah
Xiro a qaab nololeed caafimaad leh waa suurtagal illaa iyo inta aan hayno talo ama tilmaam fiican oo suurtagal ka dhigaya. Sababtaas awgeed, Nutridieta waxaad ka heli doontaa qaybo taxane ah oo dhammaystiran, si aad u dhaqan geliso inta aad daryeelka caafimaadkaaga ilaalineyso oo aad miisaankaaga xakameyso. Dhinac, waxaad ku raaxeysan kartaa cunnooyinka ugu nabdoon uguna dheellitiran ee la jaan qaadaya noloshaada.
Dabcan, dhanka kale, boggayaga internetka waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah cuntada taas oo mararka qaar miiska noo saaran, laakiin si fiican uma naqaanno. Faa'iidooyinkeeda, faa'iidooyinkeeda iyo guryaha ayaa dabooli doona inta badan macluumaadkan. Iyaga, waxaan kaa caawineynaa diyaarinta cuntooyinka macaan, maxaa yeelay cunida caafimaadka leh maahan inay caajiso.
Waxaan sidoo kale wax ka qabannaa talooyin caafimaad iyo sidoo kale cudurada qaar, si aad uheli karto dhamaan macluumaadka cusbooneysiinta oo aad latashid shakigaas mararka qaar maskaxdeena kadhasha. Dabcan, ma iloobi karno laylisyada caafimaadka ugu fiican, iyo sidoo kale isboortiga ugu badan ee lagula taliyo iyo badeecooyinka ama kaabisyada jirkaaga siin doona waxa uu runtii u baahan yahay, had iyo jeerna leh saldhig dabiici ah.
Hoos waxaad ka heli doontaa liiska dhammaan qaybaha aan wax ka qabanayno Nutridiet:
Ha ka maqnaan wararkii ugu dambeeyay ee aan ku daabacnay barteena cuntada.
Ma rabtaa inaad aragto daabacaadahayagii ugu dambeeyay ee cuntooyinka?
Ha seegin qodobbada ugu dambeeyay ee ku saabsan bartayada cuntooyinka